इलेक्ट्रिक सोफाको परिचय र फाइदाहरू – बाउटियन फर्नीचर कं, लिमिटेड.
इलेक्ट्रिक सोफाको परिचय र फाइदाहरू
बिजुली बालुवा कुर्सी फरक बटन छ. बटन मा माथि र तल बटन सोफा को पछाडि माथि र तल नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ. बिजुली सोफा को समायोजन संग, कुशन मा व्यक्तिको स्थिति पनि परिवर्तन हुनेछ, जस्तै ब्याकडाउन. कहिलेकाहीँ, मानिसहरु आफ्नो कम्मर पछाडि सार्नेछन्, र उल्टो. यदि तपाइँ यस्तो एक pls को स्वामित्व को लागी इच्छुक हुनुहुन्छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्-aसोफा ओछ्यान निर्माता.
को "जादू" बिजुली सोफा कुर्सी को छ कि जब बसे, पछाडि माथि छ, र त्यहाँ एक थप्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन फुटस्टूल अगाडी पट्टी, र खुट्टा स्वाभाविक रूप मा गिर वा footbath मा राख्न सकिन्छ. यदि तपाइँ एक footrest आवश्यक छ, तपाइँ स्वाभाविक रूप मा उठ्न को लागी नियन्त्रण बटन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यद्यपि संरचना परम्परागत कुर्सीहरु भन्दा धेरै जटिल छ, प्रदर्शन अधिक विश्वसनीय छ र ग्रेड उच्च छ.
बिजुली सोफा को लाभ:
1. बिजुली सोफा दबाव कम गर्ने प्रभाव छ. सोफा कुर्सी नरम छ र मानव शरीर मा दबाव सानो छ, त्यसैले यो सोफा कुर्सी मा बस्न को लागी अधिक सहज हुनेछ;
2. बिजुली सोफा मालिश समारोह छ. जब एक व्यक्ति मा बस्छ समकालीन कुना सोफा र एक सानो गतिविधि गर्दछ, यो स्प्रिंग्स र नरम सामाग्री को सानो कम्पन को कारण हुनेछ. मानव शरीर आवधिक परिवर्तन को लोचदार बल को अधीनमा छ, जो मालिश को भूमिका निभाउन सक्छ.
3. बिजुली सोफा लचीलो छ. सोफा को कुशन लिनन जस्तै नरम सामाग्री बाट बनेको छ, खैरो, स्पन्ज, आदि. त्यहाँ तल धेरै स्प्रिंग्स छन्, जो दुबै नरम र लोचदार छन्.
आधुनिक मल्टिफंक्शनल बेडका फाइदाहरू
ट्यागहरू: सोफा सेट किन्नुहोस्, बिजुली सोफा
पोष्ट समय: 2020-08-01